background » Computer University (Pathein)
Department of Computer University
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)၏ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း
– အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်(ပုသိမ်)အား (၄.၉.၂၀၀၀)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်ပုသိမ်မြို့မှ(၃)မိုင်ကွာ လွန်ကန်ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသော အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်(ပုသိမ်) မှ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်(ပုသိမ်)သို့ လွှဲပြောင်းလက်ခံ၍ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ပါသည်။ (၂၀.၁.၂၀၀၇) ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)အဖြစ် တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
– ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်) ကို (၂၂.၄.၂၀၁၀) ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်တံတား အနီး ပင်မသုံးထပ်ကျောင်း ဆောင်သစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။ သုံးထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်၏ ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ (၂၁.၁.၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးပါသည်။ ခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဒေါက်တာထွန်းမင်းနိုင်၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ Ph.D (IT), MIET မှ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိပါသည်။
Background history of Computer University (Pathein)
– Government Computer College (Pathein) was begun opening at 4.9.2000. In July 2001, it was opened as Government Computer College (Pathein) transferred from Government Technological College (Pathein) , which is located at Loungcan Quarter ,3miles away from Pathein. At 20.1.2007, it was promoted as Computer University (Pathein) , which was moved into the new three main stories building near the Pathein Bridge and opened at 22.4.2010. Three –storey building is finished 100% at 21.1.2014. Dr. Tun Min Naing (Principal) Associated Professor Ph.D(IT), MIET is still working.
Computer University (Pathein)